Wararka - Dahaarka polymerka ee qaboojiya dhismooyinka
Injineeradu waxay soo saareen waxqabadka sare ee PDRC (qaboojinta shucaaca maalinlaha ah) polymer oo leh nusqaanno hawo ah oo ka bilaaban kara nanometer-ka ilaa miniscels-ka oo loo adeegsan karo hawo qaboojiyaha iska ah oo loogu talagalay saqafyada sare, dhismooyinka, taangiyada biyaha, gawaarida iyo xitaa dayax gacmeedka - wax kasta oo kara Waxay isticmaaleen farsamo qaab beddelaad wajiga ku saleysan si ay polymer u siiyaan qaab u eg xumbo u eg.Marka cirka loo bandhigo, polymer polymer PDRC ayaa ka tarjumaya iftiinka qoraxda oo kululaanaya si loo gaaro heerkul ka hooseeya qalabka dhismaha caadiga ah ama xitaa jawiga hawada.
Iyada oo heerkulka sii kordhaya iyo hirarka kuleylka ay carqaladeynayaan nolosha adduunka oo dhan, xalalka qaboojinta ayaa sii kordhaya muhiim ah Tani waa arrin muhiim ah, gaar ahaan waddamada soo koraya, halkaas oo kuleylka xagaaga uu noqon karo mid aad u daran oo la filayo inuu sii xoogeysto. Laakiin hababka qaboojinta guud, sida hawada qaboojiyaha, waa qaali, isticmaal tamar badan, waxay u baahan tahay helitaan koronto oo diyaar ah, waxayna inta badan u baahan tahay qaboojiyeyaal ozone-xaalufinaya ama kululaanaya.
Beddelka hababkaan qaboojinta ee tamarta badan waa PDRC, oo ah ifafaale hawadu si iskiis ah u qaboojiso iyadoo ka tarjumeysa iftiinka qoraxda iyo kuleylka kuleylka hawo qaboojiyaha leh. Haddii dusha sare uu leeyahay iftiinka qoraxda (R) wuxuu yareyn karaa kororka kuleylka qorraxda, iyo iyadoo aad u sarreysa oo shucaaca kuleylka ah (can) uu sare u qaadi karo cirka qiiq baxa kuleylka, PDRC ayaa waxtar badan leh.Haddii R iyo Ɛ ay ku filan yihiin, xitaa haddii qatarta kuleylka saafiga ah ay dhici doonto qorraxda.
Sameynta naqshadaha PDRC ee wax ku oolka ah waa caqabado: xalal badan oo naqshadeynta dhawaanahan waa kuwo adag ama qaali ah, si ballaaran looma hirgelin karo ama looma adeegsan karo saqafyada iyo dhismooyinka leh qaabab iyo qaabab kala duwan Ilaa iyo hadda, qiime jaban oo sahlan oo la mariyo rinjiga cad ayaa halbeegga u ahaa PDRC. Si kastaba ha noqotee, daboolka cad ayaa badanaa leh midabbo nuugaya iftiinka ultraviolet oo aan ka tarjumayn dhererka dhererka dheer ee iftiinka qorraxda si wanaagsan, markaa waxqabadkoodu waa dhexdhexaad uun.
Cilmi-baareyaasha Columbia Engineering waxay soo saareen waxqabadka sare ee PDRC polymer daaha leh nanometer-ilaa micron-baaxad hawo oo loo adeegsan karo hawo hawo iskeed ah oo lagu dheehan karo laguna rinjiyn karo saqafyada, dhismayaasha, taangiyada biyaha, gawaarida, iyo xitaa meelaha banaan. - wax kasta oo la rinjiyeyn karo Waxay adeegsadeen farsamo beddelaad wajiga ku saleysan oo xalka ku saleysan si loo siiyo polymer qaab-dhismeedka xumbada u eg.Sababtoo ah farqiga u dhexeeya iscelin la'aanta u dhexeysa hawo-mareenka iyo polymer-ka ku xeeran, hawo-la'aanta ku jirta polymer-da firidhsan oo ka tarjumaya iftiinka qoraxda.